अचम्मका डाक्टर,महिला पत्रकारलाई खुसुखुसु म्यासेज « Jana Aastha News Online
| Sat Jan 22 2022
एमालेकेपी ओलीकोरोनानेकपा एमालेनेपाली कांग्रेसपक्राउप्रधानमन्त्रीभारतसंक्रमणसर्वोच्च अदालत
अचम्मका डाक्टर,महिला पत्रकारलाई खुसुखुसु म्यासेज
प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०७८, बिहीबार २१:००
नक्कली डाक्टरले उपचारका नाममा बिरामीका आफन्तलाई ठगी गरेका घटना नेपालमा खासै नौलो होइन । तर,सक्कली डाक्टरले हस्पिटलबाटै योजनाबध्द ठगी धन्दा चलाएको कुरा भने सुन्दा अचम्मलाग्दो छ । एकजना पीडितले महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालका एक चिकित्सकले सेतो गाउन भिरेर गरेका काला कर्तुतहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि अस्पतालबाटै ठगी हुने गरेको खुलासा भएको हो ।
पत्रकारसमेत रहेकी मुना कुँवरले शिक्षण अस्पतालका सहप्राध्यापक डा. सञ्जीव भट्टराईले आफूलाई आँखाको उपचार गर्ने भनी बोलाएर ठगेको घटनाविवरण सार्वजनिक गरेकी छन् । उनका अनुसार डा. भट्टराईले शुरुमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट मेसेज गरेर आँखाको समस्या भए आफूलाई भेट्न भनेका थिए ।
कुँवरले फेसबुकमा लेखेअनुसार डा. भट्टराईले उनको मेसेञ्जरमा आँखाको समस्या भए फोन गर्नु अथवा तपाईंको नम्बर दिनु भनेर मेसेज गरेका थिए । आँखाको समस्या भएकै कारण उनले आफ्नो मोबाइल नम्बर पनि पठाएकी थिइन् । त्यसको केही दिनपछि साँझ ९ बजे उनलाई फोन गरेर डा. भट्टराईले अस्पताल आउन भनेका रहेछन् ।
‘फोन चाहिँ मलाई नि आ”को हो,तर म गएको छैन,धन्न तपाईंले आँखा खोल्दिनु भो !’, सम्झना हुमागाईंले भनेकी छन् । ‘मलाई नि म्यासेज यस्तो आको थियोे साथी ! मैले वास्तै गरिन’, म्यासेजको स्क्रिनसट राख्दै कालिका खड्काले लेखेकी छिन् ।
डाक्टरले दिएको समयमा उपचार गराउन पुगेकी उनले शिक्षण अस्पतालभित्रै ठगिनु परेको बताएकी छन् । उनका अनुसार हस्पिटलको प्रोसेस छलेर डा. भट्टराईले सिधै उपचार कक्षमा लगी टिकटवापतको सरकारी राजश्व रकम आफ्नो पकेटमा हालेका थिए ।
कुँवरले लेखेकी छन्, ‘उनले मलाई टिकटको प्रक्रिया नगरी सिधै आँखा चेक गरे । चेकअपको लागि विभिन्न कोठामा डुलाए । बाहिर भीड छ भन्दै भित्री कोठामा लगे । आँखा हेरे जस्तो गरेपछि टिकट लिनु भएन छ, म यहिँबाट मिलाउँछु भने । अनि कति दिनुहुन्छ भनेर सोधे । मैले कति लाग्छ भनेँ । जति भए नि हेरेर दिनु न भने । उनले २ सय रुपैयाँ दिन सक्नुहुन्छ ? भने । मैले टिकटको चार्ज नै होला भनेर हुन्छ भन्दै पैसा दिएँ । तर,मैले पर्सबाट पैसा झिक्दै थिएँ उनले अरुले नदेख्ने गरी छेके पार्दै हतार हतार पकेटमा राखे ।’
पैसा लिएपछि चक्रपथको चण्डेश्वरी चश्मा हाउसमा गएर चश्मा बनाउनुहोस् भन्दै डा. भट्टराईले कुँवरलाई आफ्नो कार्ड थमाएका रहेछन् । उनले अर्को पटक आउनु परे टिकट लिनु नपर्ने भन्दै सिधै आउन सल्लाह पनि दिएको कुँवरले भनेकी छिन् ।
टिचिङ हस्पिटललाई ह्यासट्याग गरिएको उनको फेसबुक पोष्टमा लेखिएको छ, ‘हे भगवानजलाखौं खर्च गरी आफ्ना छोराछोरीलाई यस्ता दरिद्र डाक्टर नबनाउनु । ठग्नुको सीमा हुन्छ । बोलाई बोलाई सीधै ठगे ।’
डा. भट्टराईबाट यसैगरी अरु पनि धेरैजना ठगिएका रहेछन् । कुँवरको उक्त पोष्टमा कमेन्ट गर्ने दर्जनौंले आफू पनि त्यस्तै ठगीको शिकार बनेको बताएका छन् । कतिपयले चाहिँ महिलालाई मात्र मेसेज गरेको भन्दै डाक्टर भट्टराईको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
अर्का एकजना कमेन्टकर्ताले डा. भट्टराईलाई फटाहा भनेका छन् । उनले आफूलाई दिनुसम्म दुःख दिएको उनको भनाइ छ । अञ्जना सुवेदीले भट्टराईको हुलियासहित लेखेकी छिन्, ‘१५ वटाभन्दा बढी फेसबुक आइडी छ यो मान्छेको । एउटा आँखा फुलो परेको छ,अर्को नि त्यस्तै त्यस्तै छ । सेतो कलरको चस्ता लगाउँछन् ।’
अर्का एकजनाले चैं आफूले पनि त्यसैगरी चस्मा बनाएको बताएका छन् । ‘यो मान्छेलाई मैले बानेश्वर वरपर प्रायः देख्छु’, डा. भट्टराईको मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गर्दै उनले भनेका छन्’, ‘म टिचिङको डाक्टर हुँ त्यहाँ भीड हुन्छ भन्दै अनेक चस्मा पसलमा लगेर ठग्ने गरेको छ ।’
रुपन्देहीमा ट्रिपर चालकको दादागिरी कि बुध्दिमत्ता ?
विप्लवका जिल्ला नेतामा सांस्कृतिक “विचलन”
खुराफातले कसैलाई कहाँसम्म पु¥याउँछ
दोष अन्त थोपर्दा बाहिर जे देखिन्छ
ओभरलोडेड ९७ वटा ट्रिपर अप्ठ्यारोमा
‘दोस्रो त्रयमासमा पनि उत्साहजनक परिसूचक’
समाजवादीसँग एमालेको एक मात्र सम्पत्ति
भारतीय सेनाको हतियार किन्ने क्रम जारी
दुई जर्नेलको म्याद थपियो,अनन्त कार्कीमाथि कार्वाहीको तयारी
कार्की जर्साबको म्याद थपिए के हुन्छ,नथपिए के हुन्छ ?
रक्सी पिएर डाङ्गडुङ्ग गर्ने मेजर बर्खास्त
हेर्दै नहेरी रक्सीमा ६० करोड स्वाहा
पर्यटन बोर्डका सिईओले ‘सुन तस्करी’ गरेको ठहर
सूचना विभाग दर्ता नं. ८१४/२०७४/७५